သြင်္ကန်အကြိုနေ့နဲ့ အကျနေ့ နှစ်ရက်အတွင်းမှာ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာနကို လူနာ ၃၀၀ ကျော် ရောက်ရှိလာတယ်လို့ အရေးပေါ်ဌာန တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒီလူနာတွေဟာ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ ယာဉ်တိုက် မှုကြောင့် ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ် လို့ ရန်ကုန်ပြည် သူ့ဆေးရုံ ကြီး အရေးပေါ်ဌာန ပါမောက္ခ ဌာနမှုး ဒေါက်တာဇော်ဦးက ပြောပါတယ်။
"၁၃ ရက်နေ့က ၁၆၀ လောက်ရောက်တယ်၊ ၁၄ ရက်နေ့က ၁၉၅ ယောက် လောလောဆယ် စာရင်းပေါ့၊ အထူးသဖြင့် ယာဉ်တိုက်မှုပေါ့၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား မှုကဒုတိယ အများဆုံးပေါ့၊ အများအားဖြင့်တော့ ခေါင်းပေါ့၊ ခေါင်းထိတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ဟိုဘက်မှာ ဆေးရုံတင်ပြီးတော့မှ သေဆုံးတာ ရှိမရှိတော့ အခုလောလောဆယ်မသိရသေးဘူးလေ၊ ဒီမှာတော့ လောလောဆယ်အသေအပျောက်မရှိသေး ဘူး၊ ပြင်းထန်တာတော့ရှိတယ်"
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ သြင်္ကန်ကာလအတွင်း မတော်တဆထိခိုက်မှုအပြင် အရေးပေါ်ကုသဖို့အတွက် ရန်ကုန်ပြည် သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာနမှာ အထူးကု ဆရာဝန်တွေကို အချိန်ပြည့် တာဝန်ချထားပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် သြင်္ကန်ကာလအတွင်းမှာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို နေ့စဉ် လူနာ ၂၀၀ နီးပါးလောက် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူတွေ၊ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ထိခိုက်သူတွေ၊ အပူရှိန်ကြောင့် သတိလစ် မေ့မြော သူတွေ အများစုဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သြင်္ကန်အကြတ်နေ့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမှာ သြင်္ကန်ပွဲဆင်နွှဲကြ တဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို RFA အဖွဲ့သူ ဒေါ်ခင်ခင်အိ တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ဗိုလ်စိန်မှန်အားကစားကွင်းရှေ့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သြင်္ကန်ဖျော်ဖြေရေး မဏ္ဍပ်မှာ အွန်လိုင်းလေထန်ကုန်းသံချပ် အဖွဲ့ဟာ မနေ့ညက သံချပ်ထိုးဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ထွန်းနိုင် တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ACTIONS,HOBBIES AND TRADITIONS
1-PEOPLE ARE SUFFERING DUE TO THEIR ACTIONS,HOBBIES AND TRADITIONS (YOYAR).
2-VERY DIFFICULT TO TELL PEOPLE TO STOP DOING BAD HOBBIES AND BAD TRADITIONS(YOYAR).
3-THE PEOPLE IN THE WHOLE WORLD ALSO SUFFERING DUE TO BAD ACTIONS,HOBBIES AND TRADITION.
4-MYANMAR PEOPLE SHOULD CONTROL THEIRS HOBBIES AND TRADITIONS FOR THEIR OWN LIFE, FOR THE FAMILIES AND FOR THE COUNTRY.
Apr 15, 2015 08:00 PM